अभिमत: मैले बुझेको जापान
मैले बुझेको जापान
पत्रकार मधु लम्सालले समुद्रपारिमा लेखेको वैभव मुलुक जापानमा विताउनु परेको दुई साता भन्ने लेख पढेपछि अझैपनि नेपाली समाज कता गईरहेको छ भनेर चिन्ता लाग्यो । हामी अझै कति पछाडि रहेछौं त भन्ने बोध गरायो । नेपाली पत्रकारिता अझै कति तल रहेछ भनेर सोंच्न बाध्य गरायो ।
पत्रकार मीत्रलाई जापानको खाना र संचारले ठुलै बाध्यता बनाएछ । उनी मात्रै होईन, भ्रमण टोलीका सबै सहभागि यसैको शिकार भएछन् । यो लेख मैले नविराई पढें । लेख पढ्दै जादा दिमागमा नेपाली उखानहरु पनि भरिदै जान थाले । नाच्न नजान्ने आँगन टेंढो । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबझनेलाई खुर्पाको बींड । आदि आदि ।
मधुजी शाकाहारी हुनोहुदोरहेछ । अनि उहाँ आफै संचारकर्मी भएको कारणले संचारसंग टाढा हुन नचाहने खालको मान्छे । यो हरेक संचारकर्मीको गुण पनि हो । एकछिन समाचारसंग अभ्यस्त हुन नसकेपछि संचारकर्मीलाई धेरै छटपट हुनेगर्छ । यो जगजाहेर पनि हो ।
न पाए उसलाई अरु केहि पनि चाहिदैन । मधुजीको भ्रमण टोलीलाई पनि त्यहि भएकौ हो । बालबालिका सहितको सत्ताईस जनाकौ टोलीलाई नेपालबाट जापानमा ल्याएर दुईहप्तासम्म घुमाउन र जाप
मधुजीले भनेजस्तै न यहाँ संचार सम्पर्क गर्न अप्ठ्यारो छ, न त खानाको कुनै समस्या नै । बरु विश्वमा नभएका संचार र खाना सम्बन्धि केहि कुराहरु जापानबाट सिकेर जान सकिन्छ । नेपाली समाज अझै पनि अरुप्रति आश्रित छ । पाएसम्म अरुकै आश्रयमा बाँ
च्नन चिनाउनेहरु हाम्रा लागि ठुला छाती भएका हुन् । एउटा नेपालीको तर्फबाट म उनीहरुलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन्छु । यो कति झण्झटिलो र खर्चिलो काम हो भन्ने कुरा एकछिन गहिरिएर सोच्यो भने थाहा भईहाल्छ । मधुजीहरु विश्वकै सबैभन्दा सस्तो शहरबाट सबैभन्दा महंगो शहरमा घुम्न आउनभएको हो ।
ेहि भत्ता र जिन्सी सामान पनि पाईन्छ । अनि आयोजकले पनि समाचारको लोभमा पत्रकारले जे माग्यो र जे उपयोग गर्न खोज्यो त्यसको व्यवस्था राम्रैसंग मिलाईदिन्छन् । यसैले कुनैपनि कार्यक्रमका सहभागिहरु आयोजकप्रति आश्रित हने परम्परा अझै नेपाली समाजमा विद्यमान छ ।, अनि कार्यक्रममा गएर सोचे अनुसार भएन भने उल्टे आयोजकलाई गाली गर्यौ । बस्यो । मधुजीको टोली जापान आएर पनि जापान चिन्न नसक्नु यो उहाँहरुको ठुलो कमजोरी हो । जापान एशियाको मात्रै होइन, विश्वकै वैभव, शक्तिशाली, औधोगिक अनि संचार सुविधाले सम्पन्न देश हो । यसैले यहा केहि कुराको कमी छैन । भ्रमणमा मधुजीको तयारीको मात्रै कमी हो । कहि कतै निस्किहालेमा हाम्रो पुर
नेपालमा धेरै कार्यशाला, गोष्ठी, पत्रकार सम्मेलन र अन्य यस्तै कार्यक्रमहरु हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा आयोजकले सबै खर्च बेहोरिदिन्छन् । सबैभन्दा पत्रकारहरुलाई यस्ता कार्यक्रमको अवसर धेरै हुने गर्दछ । त्यहा गएपछि राम्रोसंग भनेअनुसार खान पाईन्छ र रामै्र आयोजक परेमा
के तयारी हुदैन । यसैले हामीले सास्ती र हैरानी बेहोछौं । पछाडि फर्केर हैर्ने बानी हाम्रौ छैन । के पर्छ कसो पर्छ भनैर आफ्नौ दैनिक जीवनमा आईपर्नै कुरालाई सधैं तयारी अवस्थामा राखिरहन पर्छ ।
र र तरकारी हातले सर्याप सर्याप खान पनि पाईन्छ, जापानमा । तर यसको लागि थोरै तयारी चाहि चाहिन्छ है । जापानीजहरु पनि धेरै शाकाहारी खाना खान्छन् । उनीहरुले खाने शाकाहारी खाना जुनसुकै सपिंग सेन्टरमा गएपनि सहज उपलव्ध हुन्छ । मधुजीले खाएको निस्तो भातको डल्लोलाई जापानमा ओनिगीरी भन्छन् । यौ निकै पौष्टिक हुन्छ । उहाले त यसलाई पिण्ड भन्नुभएकौ रैछ । आोनिगीरी सहितको शाकाहारी सेट जहापनि किन्न पाईन्छ । अहिलै त जापानमा नेपाली तथा ईण्डियन रेष्टरेण्ट गल्लीगल्लीमा खुलेका छन् । यसैले नेपाली स्वाद खान चाहेपनि नपाईने कुरै छैन । यस्ता खानाहरु हेम डेलिभरि गर्ने सुविधा पनि हन्छ । जापानको मुख्य खाना भात र माछा हो । जापानीजहरु थोरै खान्छन्, खाइरहन्छन् । त्यसमा पनि क्यालोरी मिलाएर खान्छन् । अरु क्षेत्रमा जस्तै खानकुराको क्षेत्रमा पनि संसारबाट खानेकुरा आईपुग्नै जापानमा यसबारे धेरै अनुसन्धान र विकास भएको छ । जापानका होटलमा टिप्स दिने चलन पटक्कै छैन र उनीहरुले पनि एक पैसा छाड्दैनन् । जापानीहरु हेटलका खानेकुरामा भन्दा खाने तरिकामा बढी महत्व दिन्छन् । जस्तोसुकै दिएपनि र जतिसुकै नमिठो भएपनि ओइसी देस अर्थात् मीठो छ भन्न उनीहरु कहिल्यै पछाडि हट्दैनन् । एउटा पत्रकार जापानको टेक्नोलोजीसंग भिज्न नसक्नु आफैमा दुःखद कुरा हो । यहाको संचारसंग भिज्न नसक्नु मधुजीको आफ्नै कमजोरी हो । किनभने जापानीज टेक्नोलोजी धेरै माथि छ । जान्यो भने यो धेरै सह
जहाज चढेदेखि जापान बसाईसम्म शाकाहारी खाना सहज उपलव्ध नभएको , जापानमा बासी र जुठो खाना भन्ने त सामान्य रहेछ भन्ने मधुजीको कुरालाई म कदापि विश्वास गर्न सक्दिन । नेपालमा जस्तै दाल, भात, अ
चाज पनि छ । यहाँ सार्वजनिक ठाउ, सबै सपिग सेण्टर र चोकचोकमा टेलिफोन बुथहरु हुन्छन् । कार्ड र पैसा दुवै प्रयोग गरेर यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । कार्ड पनि सपिंग सेण्टरहरुमा फालाफाल पाईन्छ । तपाईसंग ईण्टरनेट चल्ने खालको नेपालको मोवाईल छ भने जापानमा नया सिमकार्ड हालेर पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । प्रिपैड मोवाईल सेट सहितको सिमकार्ड पनि किन्न पाईन्छ, जापानमा । यौ खर्चिलो पनि छैन । एउटै कम्पनीका मौवाईल नम्बरहरुमा फौन गर्दा निशुल्क गर्न पाईन्छ । यसैलै तपाईहरुले तरिका नजानेर हो । फेरि तपाईले नेपालमा चलाईराखैको मोवाईलमा रोमिंग सर्भिस छ भनै जापानमा पनि चल्छ । यताको मोवाईल नेपालमा पनि चल्छ । ईण्टरनैट क्याफे पनि छन् यहाँ । मधुजी मश्किलले साईवर क्याफे त जानुभएछ । तर एक घण्टाको सोह्र सय यन तिरेपछि उहाले साइवरको मामला पनि छाडिदिनभयो रे । किनभने नेपालीको लागि यो धेरै महंगो रकम हो । तर मधुजीले यो पैसो इण्टरनेट चलाय वापतको मात्रै तिरेको होईन । उहाले यो पैसा हालेर क्याफेको समय किन्नुभएको हो । मधुजी गएको क्याफेमा इण्टरनेटबाहेक खाने, पिउने, मसाज गर्ने, किताब पढ्ने, अरु थप्रै मनोरंजनका कुराहरु हुन्छन् । आफ्नो समयभित्र त्यहा गएर यी सबै सुविधा उपयोग गर्न पाईन्छ । ईण्टरनेट चलाउदै खाने पिउने गरेको भए तपाईको चित्त पनि बुझ्थ्यो होला है । नेपाल टेलिफोन गर्न प्रतिमिनेट पन्ध्र यन भन्दा बढि पर्दैन ।
तै त्यो जापानीज लिडरले पनि तपाईलाई हेरेर एउटा नेपाली समाजको खाका कोरिसकेको छ । नेपालप्रति उसले नकारात्मक धारणा बनाइसक्यो । कालान्तरमा उसले बनाएको नेपाली धारणा सत्य सावित हुन्छ भने तपाईले कोरेको जापानी समाजको धारणा गलत हुनेछ । किनभने नेपाली समाज यस्तै हो भन्ने कुरासंग
जापानमा रहेका लगभग सबैसंग कम्प्युटर हुन्छ । अनि आफुसंग ल्यापटप भयो भने धरैजसो ठाउमा निशुल्क इण्टरनेट प्रयोग गर्न पनि पाईन्छ । कहि जान पर्यो भने त्यो ठाउँको फोन नं मात्रै भन्न सक्यो भने पनि सम्बन्धित ठाउमा पुग्न सकिन्छ । नेपालमा जसरी साईवर क्याफेहरु त यहाँ हुदैनन् । तपाईहरुलाई आफूखुसी घुम्न बन्देज लगाइनु र फोन सम्पर्कबाट टाढा राखिनुको रहश्य एकाग्रताको लागि पनि हो जस्तो लाग्छ । भ्रमणमा आएपछि एकाग्रता भएर चिन्तन त लिनुपर्यो नि । होइन र ? तपाईहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदियो भनै ठुलै दुर्घटना भयो भने के गर्ने ? तपाईहरु कार्यक्रम स्थल छाडेर जानुभयो भने के गर्ने ? नया ठाउँमा कोहि हराए भने के गर्ने ? फेरि जापानीजहरुले धेरै फोनमा कुरा गरिरहेको पनि मन पराउदैनन् । अझ अरुको मोवाइल मागेर फोन गर्ने र सम्पर्क नम्बरको रुपमा अरुकै नम्बर दिने कुरालाई यहाँ त अपराधै गरेजस्तो हुन्छ । तपाईका कुराले तपाईसंग जापानीज लिडर रिसाएको बोल्नै छाडेको, खाने बेलामा तपाइलाई हेरेर मन विगारेको र नेपाल फर्काएपछि उसलाई आनन्द भयो होला भन्ने तपाईको भावनाले मलाई एउटा नेपाली भएको नाताले लाज लाग्यो । जापानीजहरु कमै रिसाउछन् । एउटा विदेशीले गरेको व्यवहारलाई जापानीजहरुले त्यो देशसंग तुलना गरेर हेर्छन् । जापानको सीमित ठाउमा घुमेको र सीमित जापानीजहरुको संगतको अध्यननबाट तपाईले पुरै जापानी समाजलाई नकारात्मक रुपमा लिएज
स्तै हामी परिचित नै छौं । कमसेकम नया ठाउमा आईसकेपछि केहि समय नया परिवेशमा रमाउन सक्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्रै पर्यटक भईन्छ । यति गरिएन भने यहाको रहनसहन, रितिरिवाज र संस्कृति कसरी जान्न सकिएला र ? तपाइ को अनुभव त कुवाको भ्यागुतो लाइ बगेको खोला मन नपरेको जस्तो भयो । वास्तवमा कुनै पनि वस्तु र संसार सुन्दर देख्नको लागि यात्रीको अनुभव, विचार र दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्दछ । यसैले विदेशमा यात्रीले जे खोज्यो, त्यही मात्रै पाउँछ । सुन्दरताको खोजीमा संसारकै परिक्रमा गरेपनि त्यो यात्रीसंग भएन भने कहिल्यै पाउन सकिंदैन । जापानमा रहँदा पैसाले किन्न नपाईने अविस्मरणीय कतिपय अनुभव बटुल्न पाईन्छ । अनुशासित, इमानदार, मिहिनेती, सम्वेदनशील र दयालु स्वभावको चरित्रगत विशेषताले जापानी समाजको निर्माण भएको छ । आधुनिकताको नाममा अरुलाई पिरोल्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाए सन्तुष्ठ हने र सकभर व्यक्तिवादिताको प्रदर्शनतर्फ अग्रसर हामी नेपालीहरुले जापानी शैलीको यो शिष्टता र सम्वेदनशीलतालाई ग्रहण गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 6:50 PM